Midowga Afrika oo war ka soo saaray xiisadda ka dhex oogan Kenya iyo Soomaaliya - Caasimada Online
Home Warar Midowga Afrika oo war ka soo saaray xiisadda ka dhex oogan Kenya...
Midowga Afrika oo war ka soo saaray xiisadda ka dhex oogan Kenya iyo Soomaaliya
Jabuuti (Caasimada Online) – Gudoomiyaha Midowga Afrika, Moussa Faki Mahamat oo kamid ah madaxdii ka qeyb gashay furitaanka shirka madaxda urur goboleedka IGAD ayaa ka hadlay xiisada xoogan ee ka dhex aloosan dalalka Soomaaliya iyo Kenya.
Guddoomiyaha ayaa sheegay in xiligan loo baahan yahay in si deg-deg ah loo xaliyo khilaafka diblumaasiyadeed ee labada dal, isagoona walaac ka muujiyey xiisada horseeday in dowladda Soomaaliya ay xiriirka u jarto xukuumadda Nairobi.
Mahamat ayaa labada dhinac ka dalbaday inay furaan wada-hadal wax looga qabanayo arrimaha taagan, xili labada madaxweyne ay maanta ku kulmeen magaalada Jabuuti, taasi oo ay ka shaqeeyen madaxweynaha Jabuuti iyo Ra’iisal wasaaraha Itoobiya.
“Xiisaddii dhawaan dhexmartay Kenya iyo Soomaaliya oo ah laba waddan oo deris ah taas oo sababay in uu go’o xiriirkii diblomaasiyadeed ayaa ah arrin walaac weyn ku ah Midowga Afrika. Sidaa awgeed, waxaan jeclaan lahaa in labada dal aan ka codsado in ay furaan wada-hadal ujeedadiisu tahay in dib loo soo celiyo xiriirkii diblomaasiyadeed iyo in aan ka codsado urur goboleedka IGAD in labadani dal ay arrintaas ku dhiiri-geliyeen,” ayuu yiri.
Sidoo kale waxa uu madaxda ku bahoobay IGAD ka dalbaday inay qeyb ka noqdaan xal u helida xiisada Kenya iyo Soomaaliya oo gaartay meeshii u sareysay, tan iyo markii ay dowladda federaalka u jartay xiriirkii diblumaasiyadeed, kadib markii ay Kenya ku eedeysay inay faro-gelin qaawan ku hayso arrimaha gudaha dalka.
Labada madaxweyne ayaa maanta waxaa isu keenay oo kulankooda goob-joog ka ahaa Madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle iyo Ra’iisul Wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed, oo isku dayaya inay xaliyaan xiisadda ka dhex oogan.
Kulanka ay maanta yeeshen madaxda Soomaaliya iyo Kenya ayaa hordhac u yahay kulan guud oo isla maanta yeelanayeen dhammaan madaxda IGAD.